Mpumalanga: Kusuka Ekubeni Indawo Yempi kuya Ekubeni Yisizinda Sethemba - Durban Local History Museums
Mpumalanga: Kusuka Ekubeni Indawo Yempi kuya Ekubeni Yisizinda Sethemba
By Durban Local History Museums7th June 2021Articles, Exhibitions
Ukuguquka kweNingizimu Afrika isuka embusweni wabaMhlophe wobandlululo kuya ekuphathweni ngokwentando yeningi kushayelwa ihlombe kakhulu. Ngokwazi umlando omningi othinta indaba yokucindezelwa kwezakhamuzi zaseNingizimu Afrika, ukunikezelana kwamandla ombuso esuka kumunye uhulumeni uya komunye kwenziwa kahle kakhulu, ikakhulukazi uma sibuka isimo ebesisuka kuso. Kungenzeka ukuthi izehlo zaseMpumalanga zangokuphela kweminyaka yawo 1980 kanye nokuqala ko 1990 kwaba isexwayiso esanele kubaphathi bezwe.
Indawo yaseMpumalanga inomlando odonsa amehlo abantu abaningi okunatshwe ngawo kwi an essay, elotshwe ngumenzi wocwaningo u-Seven Kotze ngaphansi kwe-Durbal Local History Museums’. Ziningi ke izizathu ezenza ukuthi u-Kotze abhoboze ithumba ngodlame oluphethuke nje ngaphambi kokuba kuphume uhulumeni wobandlululo embusweni, okunye kwakho ukubangwa kodaba lomhlaba, kube ukungavumelani ngezinto zesintu kanye nenkobo yobu Krestu, ukuthuthuka kanye nokuhlelwa kwezindawo nguhulumeni wobandlululo. Kodwa ke ngokubuka komuntu oseceleni, ukungezwani kwakuphehlwe kakhulu ukuhlukana kwabantu ngamaqembu ezombusazwe, ngoba phela udlame oluningi beluphakathi kwabantu ababengaphansi kweqembu Inkatha National Cultural Liberation Movement manje esibizwa ngokuthi (the Inkatha Freedom Party) kanye nabalandeli beqembu United Democratic Front (UDF).
Umgcwabo welunga le Inkatha Freedom Party ebeliyisishoshovu sayo esasishone kuliwa ne United Democratic Front
Abanye lendawo babeyichaza njenge ‘Little Beirut’ ngenxa yodlame obelukhona, Ngasekupheleni kweminyaka yama 1980 ilokishi iMpumalanga lasingathwa udlame olukhulu okwakunzima nokuthi lubhulwe:
Okwakuhluke kakhulu ngalokhu kulwa ukuthi kwakungekho ukuthi kube khona umuntu ophakathi nendawo ngoba phela wonke umuntu kwakumuphoqa ukuthi athathe uhlangothi oluthile noma ngabe bona babehambisana naliphi iqembu ngokwembono yabo. Ukuthi uhlala ngakuliphi uhlangothi noma umuzi wakini ungakuphi ikhona okwakusho ukuthi wena ungakuliphi uhlangothi, lokho kusho ukuthi uma sekuhlaselwa abahlala esigodini esithile kwakuboshwa ngabhande linye “
Steven Kotze, The oral history of political violence as an education tool at Mpumalanga Township, July 2015
Noma imzamo yokulungisa lesi simo yayibhuntsha, kwafika isikhathi lapho okwabonakala khona ukuthi cha akusekho okunye okungenziwa ngaphandle kokuthi kubekwe phansi izikhali. Kuthe ngo Mbasa ngonyaka ka 1990 ngendlela isimo ebesisibi ngayo kwabaphoqa abaningi ukuthi babaleke bashiye amakhaya abo beyobhaca kwezinye izindawo. Lokhu kuhamba kwabantu beshiya imizi yabo kwenza le ndawo isale ibe isigcawu sempi . Bathe abaholi bakulendawo sebebona impela ukuthi izinto azikwazi ukuqhubeka ngendlela eziqhubeka ngayo, abaholi banhlangothi zombili bathatha isinqumo sokuthi kuhlalwe phansi kubanjwe izingxoxo zoxolo, kuthelelwane amanzi lokhu kwenza iqembu leNkatha kanye nelika Khongolose benze isivumelwane sokuthi kushicilelwe isivumelwane esasibekwe inhlangano yezamabandla ezenkolo (South African Council of Churches). Kwathi nje ngokuhamba kwezinyanga ezimbalwa lwehla udlame olwaluseluhlalise abantu lubhojizi. Ngonyaka ka 1993 inhlangano African Centre for the Constructive Resolution of Disputes yaklomelelisa umphakathi wase Mpumalanga ngendondo ye “the inaugural Africa Peace Award” ngenxa yendima edlalwe izakhamuzi ukuthi kubenoxolo nokuthula endaweni ebeyaziwa njengesizinda sodlame ukuthi ibe ngezinye zezindawo ezaziwa ngokuthula.
Uma unogqozi ngokwazi mayelana nezindaba kanye nomlando waseMpumalanga, vakashela indawo yakhona yamagugu ebizwa ngokuthi Mpumalanga Heritage Centre. Kulendawo kunombukiso ochaza ngomlando walendawo, kanti iphinde ichaze ngoshintsho kusuka ekubeni indawo yempi nokuchitheka kwegazi kuya ekubeni indawo abaningi abayibiza ngekhaya namhlanje.
Izithombe zomgcwabo we IFP nizethulelwa abakwa digitalcollections.lib.uct.ac.za
Inkatha Freedom PartyMpumalanga Heritage CentreMpumalanga Peace and Development TrustSteve KotzeUhulumeni WobandlululoUnited Democratic Front
SACO Study on the Impact of Covid-19 on Museums Calls for Survey Respondents